Vehivavy Ekoatoriana Iray Miady Ny Zony Hamonjena Ny Zaobaviny Amin'ny Famindràna Taova
Amerika Latina 30 Avrily 2015
Daniela Peralta miady amin'ny lalàna Ekoatoriana izay mandràra azy tsy hanome taova hamonjena ny zaobaviny mararin'ny tsy fahafahan'ny voa miasa ara-dalàna.
Nanjavona Teny Amin'ny Sisintanin'i Emirà Arabo Mitambatra Ilay Bilaogera Omaney Muawiyah Alrawahi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Avrily 2015
Araka ny fanambarana navoakan'ny fikambanana ho an'ny fiarovana ny mpanao gazety, notazonina ny bilaogera Omaney iray, Muawiyah Alrawahi, raha nanandrana ny hiditra tao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny fiara avy any Oman.
Armenia 30 Avrily 2015
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Avrily 2015
Etiopia 29 Avrily 2015
Nahazo Fialokalofana tao Espaina ihany ilay Lesbiana Nandositra Fanenjehana tao Kamerona
Eoropa Andrefana 27 Avrily 2015
Na dia firenena malalaka indrindra manerana izao tontolo izao amin'ny fanajana ny zon'ny LGBT aza i Espaina, dia tsy mirona loatra amin'ny fanomezana fialokalofana kosa ny andrim-panjakana ao aminy.
Ankizy 115 Farafahakeliny No Namoy ny Ainy Vokatry Ny Ady Ao Yemen
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Avrily 2015
Ankizy 115 farafahakeliny no namoy ny ainy ary 172 kilemaina vokatry ny ady ao Yemen nanomboka tamin'ny 26 Martsa, araka ny tatitry ny UNICEF. Mbola mety hiakatra izany isa izany.
Tsarovana Ao Ejypta Ny Fahazato Taonan'ny Fandripahana ny Armeniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Avrily 2015
Na dia tsy mankato ny fisian'ny Fandripahana ny Armeniana aza i Ejypta, nankalaza ny fahazato taonan'ny fandripahana tao Cairo ireo Armeniana Ejyptiana.
Mpikatroka Pakistaney Maty Voatifitra Rehefa Avy Nampiantrano Hetsika Momba an'i Balochistan
Azia Atsimo 26 Avrily 2015
Ny harivan'ny 24 aprily, maty voatifitra i Sabeen Mahmud, iray amin'ireo mpikatroka ara-tsosialy malaza indrindra ao Karachi, rehefa avy nampianatrano ny hetsika antsoina hoe "Unsilencing Balochistan" izay nokarakarain'ny fikambanana The Second Floor.